I-GroupSolver: Sebenzisa i-AI ne-NLP Ekucwaningweni Kwemakethe | Martech Zone
Uma uke wakha ucwaningo futhi unethemba lokuthola okutholakale kokulinganisa nobungako kuzimpendulo, uyaqonda ukuthi kunzima kangakanani ukubuza imibuzo. I-verbiage, ukwakheka nohlelo lolimi olucelayo kungaholela emiphumeleni ezoholela ekucwaningweni kocwaningo lwakho.
Njengomphathi womkhiqizo, ngagijimela kulokhu okuningi ngamaqembu wokugxila. Ukube bengivivinya i-interface entsha yomsebenzisi, ukucela impendulo kungenza umamukeli ahlole isikhombimsebenzisi ukuze azame ukuthola okuthile okungahambi kahle… yize kungenzeka ukuthi yakhelwe kahle. Uma ngibuza ukuthi kukhona yini okunzima noma uma kukhona okushodayo, umsebenzisi angabheka ngokushesha inkinga… okungenzeka ukuthi ayikho.
Esikhundleni salokho, simane sacela umsebenzisi ukuthi athathe isenzo abese echaza ukuthi bahamba kanjani ngesenzo. Ngenkathi lokhu kususa noma yikuphi ukuchema, kudinga ukuhlaziywa okuningi kokuthunyelwe ukulinganisa imiphumela ekucabangeni kwekhwalithi noma ezincomweni. Leyo miphumela bekuvame ukuthi kube njalo ukuqagela okuhle… Hhayi i isiphetho esivumelekile ngokwezibalo.
Ukucubungula Kanjani Ulimi Lwemvelo Nokufunda Komshini
Eminye yemininingwane ecebe kakhulu, eletha uguquko evela ngokucela imibuzo evulekile. Kungani uyisibonelo esihle. Kepha impendulo ku kungani akuyona impendulo yezinombolo, kanambambili, noma yokukhetha… ngakho-ke bekulokhu kunzima ukuthola imiphumela yobungako nekhwalithi oyidingayo ngokubuza imibuzo evulekile ukuqondisa izinqumo zebhizinisi.
Ngokujabulisayo, ukucutshungulwa kwezilimi zemvelo (NLP) kanye ne- ukufunda imishini (ML) ingazinqoba lezi zinkinga! Ngokuhlanganisa ukufunda komshini nobuhlakani besixuku, I-GroupSolver iyipulatifomu yezobuchwepheshe bokucwaninga emakethe esebenzisa ubuhlakani bokufakelwa ukubuza nokuhlanganisa imibuzo esezingeni eliphakeme kanye nemibuzo eningi ekuhloleni okuku-inthanethi.
Ukubuka konke kweGroupSolver
I-GroupSolver ingena phakathi kwamapulatifomu ozenzela wona, njengeSurvey Monkey neGoogle Surveys, nezinkampani zocwaningo ezigcwele, njengeMcKinsey & Company neAccenture.
Okwenza iGroupSolver ihlukaniswe yindlela yabo yokucubungula izimpendulo zolimi lwemvelo, besebenzisa:
Isixuku Intelligence - Abaphenduli baphendula imibuzo evulekile ngamazwi abo, bese bayasebenzisana.
Ukufunda komshini - Izimpendulo ezivela emibuzweni evulekile zicutshungulwa nge-algorithm enamandla futhi yokuzilinganisela.
Izibalo Ezithuthukile - ipulatifomu iqinisekisa izimpendulo zolimi lwemvelo futhi ilinganise imininingwane esezingeni elifanele.
Amathuluzi weGroupSolver Afaka
I-AI Open Answers ™ - Ngokuhlanganisa ukufunda komshini nobuhlakani besixuku, iGroupSolver ihlela ngokuzenzakalela futhi ilinganise izimpendulo ezivulekile. Akukho ukuqeqeshwa kwedatha, akukho ukulinganiswa komuntu, futhi akukho ukufaka amakhodi kwamahhala okudingekayo.
IdeaCluster ™ - I-IdeaCluster ikhombisa ukuhlangana phakathi kwezimpendulo ezingaphenduliwe. Kusiza kakhulu lapho kwakhiwa amakhasimende we-personas noma uxoxa indaba yomkhiqizo. Lokho kulungile - amamodeli wokuhlanganisa akhululiwe weGroupSolver nobukhulu obuvela ebudlelwaneni obukhethekile nedatha yokulinganisa.
IntelliSegment ™ - I-IntelliSegment iyithuluzi lokuhlukanisa elinobuhlakani elingakusiza uqonde ukuthi izimpendulo zemibuzo evulekile zihluka kanjani kumasegmenti athile ophendulayo. Kufana nokuthola indaba esitokisini.
IdeaCloud ™ - I-IdeaCloud isethulo esihlanganisiwe nesibekwe eqhulwini sezimpendulo ezisekelwa kakhulu embuzweni ovulekile. Ifonti enkulu isho izimpendulo ngokusekelwa okuphezulu phakathi kwabaphendulile. Ifonti encane ngeyokuthi… kahle, izimpendulo ezingazange zikwenze kahle.
Isixazululo Sokuvumelana ™ - Isixazululo Sokuvumelana yisethi yezimpendulo ezisekelwa kakhulu ezihlobene ngokuqinisekile. Kukhombisa izimpendulo ezihambisana kahle futhi ezakha isivumelwano sokuvumelana phakathi kwabaphendulayo.
Kuphendula uKhetho - Ngaphandle kokuba yisinkwa nebhotela yocwaningo lwenhlolovo, izimpendulo zemibuzo ekhethwa ngabaningi zingasiza ekwakheni izingxenye eziphendulayo zemininingwane ecebile. Sizigcina zintsha futhi zivuselelwa ngesikhathi sangempela.
Umngenisi wedatha - Uma usuvele uqoqe imininingwane mayelana nabaphendulayo, ungayilayisha kudeshibhodi yethu. Yisebenzise ukusika idatha yeGroupSolver noma ukwakha izingxenye ezintsha zabaphendulayo.
Umphathi Wezimpendulo - Buka ukuthi abaphenduli bayiphendula kanjani imibuzo yakho ngesikhathi sangempela. Qoqa bese uwaqinisekisa ngokuchofoza inkinobho. Siyawethemba umshini wethu, kepha imininingwane kwesinye isikhathi idinga ukuthintwa okuthambile komuntu.
Isilandi sedatha - Thumela idatha eluhlaza ukuze uhlaziye ngokuqhubekayo ngesoftware yezibalo ejwayelekile njenge-SPSS, R, noma i-Excel.
Ideshibhodi ebonakalayo yeGroupSolver inika amandla abasebenzisi ukuthi babuke futhi basebenze ngokuqonda kwakho. Idatha icutshungulwa futhi ibuyekezwe njengoba iqoqwa, ukuze ukwazi ukuhlola kuqala imiphumela nganoma yisiphi isikhathi.
Cela i-Groupsolver Demo
Tags: aiukuhlakanipha okungekhona okwangempelaiqoqoucwaningo lwemaketheipulatifomu yocwaningo emakethemlukucutshungulwa kwezilimi zemveloNlp